Yintoni i-Polymyalgia Rheumatism? [Yonke into ekufuneka uyazi ngeRheumatic PMR]
Yintoni ofanele uyazi ngePolymyalgia Rheumatism
12 / 06 / 2019 /0 Amazwana/i rheumatism/av ubuhlungu
Yintoni ofanele uyazi ngePolymyalgia Rheumatism (PMR)
I-rheumatism ye-Polymyalgia sisifo esosulela ngokwasemzimbeni.
Ukuphazamiseka kubonakaliswa, phakathi kwezinye izinto, iintlungu kunye nentlungu emagxeni, esinqeni nasentanyeni- kunye nokuqina kwentsasa okunxulumene noko. Intlungu kunye nokuqina zihlala ziba zimbi kakhulu kusasa.
Akukho golide emlonyeni apho. Endaweni yokuba ngwevu.
Kumasebe ethu ahlukeneyo eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kunye noViken (Eidsvoll Isandi og Råholt), oogqirha bethu banobuchule obuphezulu obukhethekileyo kuvavanyo, unyango kunye noqeqesho lokubuyisela kwi-myalgias yexesha elide kunye neentlungu zemisipha. Cofa kwiikhonkco okanye apha ukufunda ngakumbi malunga namasebe ethu.
Iimpawu zakudala zePolymyalgia Rheumatism zibandakanya:
Ukuziva ngokubanzi kubuthathaka
Umkhuhlane omncinci kunye nokudinwa
Ubuhlungu kunye ne-hypersensitivity kumagxa, esinqeni nasemqaleni
Iingcebiso zePolymyalgia Rheumatism
I-Polymyalgia rheumatica luxilongo oluhlala lubonakaliswa kwinqanaba eliphezulu loxinzelelo lwemisipha kumqolo ongaphezulu, kodwa nakwi-back back kunye ne-pelvis. Xa izigulana zethu ezine-PMR zicela iingcebiso malunga nemilinganiselo yokuzimela, sihlala sigxininisa ngokukhethekileyo ekuphumleni. -cofa mat kunye nokusetyenziswa kwe iibhola zokuthambisa (izixhumanisi ezivulekileyo kwifestile entsha ye-browser) ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo kunokukunceda ukunciphisa ukugqithisa kwimisipha kwaye ube nomphumo opholileyo.
I-Polymyalgia Rheumatism kunye neRheumatic Arthritis
Kwangoko, bekucingelwa ukuba i-rheumatism ye-polymyalgia yayiyindlela yesifo samathambo kubantu abadala. Ayilunganga-njengoko zizinto ezimbini ezahlukileyo zokuqonda isifo.
Umahluko obaluleke kakhulu kukuba i-PMR ayikhokeleli ekutshatyalalisweni kwe-cartilage kunye nendawo edibeneyo- ngokungafaniyo nesifo samathambo. Ukuxilongwa nako akuchaphazeli izandla, izihlahla, amadolo neenyawo. Imeko nayo ayisosigxina- kodwa inokuqhubeka ukuya kuthi ga kwiminyaka esi-7.
Ngubani umntu ochaphazelekayo yiPolymyalgia Revmatika?
I-rheumatism ye-Polymyalgia lolona nyango luqhelekileyo lokuchaphazela isifo esichaphazela abo bangaphezulu kweminyaka engama-50 ubudala. Umngcipheko wokukhula kwesi sifo uyonyuka ngokuhamba kweminyaka - kwaye umndilili weminyaka yabo bachaphazelekayo uneminyaka engama-75 (1).
Abasetyhini banamathuba ama-2 ukuya kwangama-3 aphezulu okufumana isifo. Ngamanye amagama, ixhaphake kakhulu into echaphazela abasetyhini abadala.
I-Polymyalgia Rheumatism ikunikeza njani kubuhlungu?
Uvavanyo lwe-MRI luya kubonisa umfanekiso ocacileyo wento eyenzekayo kunye nokujikeleza amalungu akho. Kwi-PMR, uyakubona ukudumba kwi-synovial membrane - efumaneka kwiisaka ze-mucous, amalungu kunye neetoni. Ukunyuka kwamanzi kunye nokuvuvukala kunika isiseko seentlungu.
Oyena nobangela wokudumba ngenxa ye-PMR awukaqondwa ngokupheleleyo. Uphando lubonisa ukuba i-genetics, i-epigenetics, usulelo (iintsholongwane kunye neebhaktheriya) inokudlala indima ebalulekileyo ekubeni kutheni umntu ephuhlisa ukuxilongwa (2).
I-Polymyalgia Rheumatism kunye nokuvuvukala
I-PMR ngoko inika ukudumba okungaphezulu kunesiqhelo.Ezona ntlobo zixhaphakileyo zokudumba ezinxulumene ne-polymyalgia rheumatica yi-bursitis (ukudumba kwenwebu ye-mucous), i-synovitis (yamathambo) kunye ne-tenosynovitis (ukudumba komphandle we-tendon - i-tendon).
I-rheumatism ye-Polymyalgia inika rhoqo ukuvela kwe-bursitis emagxeni nasezinkalweni. I-Bursitis ke kukudumba kwesingxobo se-mucous-isakhiwo esigcwele ulwelo esiqinisekisa ukuhamba kakuhle phakathi kwamathambo kunye nezicwili ezithambileyo ezikufuphi. Ngokudumba, oku kugcwele ulwelo olongezelelweyo olubangela iintlungu.
I-Synovitis (isifo samathambo)
Ukudityaniswa kwamanqina kunye nokudibanisa amalungu e-hip kungachaphazeleka yi-syovovitis. Oku kuthetha ukuba inwebu ye-synovial iyavutha kwaye sifumana ukwakheka kolwelo ngaphakathi kwimbrane-ebangela iintlungu ezidibeneyo, ukukhula kobushushu kunye nolusu olubomvu.
Xa umaleko wangaphandle wenwebu ejikeleze i-tendon uvutha, oku kubizwa ngokuba yi-tenosynovitis. Oku kwenzeka rhoqo phakathi kwabo bane-PMR - kwaye enye yeenguqulelo eziqhelekileyo yi-Dequervain's Tenosynovitis yezandla.
I-Polymyalgia Rheumatism kunye nokuzivocavoca
Ukufumana imithambo efanelekileyo kunye noqeqesho kuwe nge-PMR kunokuba nzima. Kodwa kubalulekile ukuba uqhubeke uqhubela phambili ukukhuthaza ukuhamba kwegazi kunye nokuthambisa amalunga kunye nezihlunu ezonzakeleyo.
Kwividiyo engezantsi uza kubona inkqubo yoqeqesho kwabo bane-polymyalgia rheumatism ephuhliswa yi I-chiropractor kunye nonyango oluvuselelayo uAlexander Andorff. Le yinkqubo eyahlulahlulwe kwi-3 - intamo, ihlombe kunye nezinqe, njengoko ngokuqhelekileyo ezi ndawo zichaphazelekayo yi-PMR.
Kucetyiswa iMilinganiselo yokuSelf ngokuchasene nePolymyalgia Rheumatism
Ngenxa yokuba ukuxilongwa kuhambelana ngokucacileyo nokunyuka kwengcinezelo kunye neentlungu kumqolo ongaphezulu, kunye namagxa, kodwa nakwi-pelvis kunye nasezinqeni, sincoma imilinganiselo yokuzimela enokunciphisa intlungu yemisipha. -cofa mat (ikhonkco livula kwifestile entsha) ngumlinganiselo owawakho abantu abaninzi abawuva ukuba ubanika ukuphumla kunye nokukhululeka ngokuchasene nezihlunu ezixineneyo. I-mat nayo inendawo yayo yentamo eyenza kube lula ukusebenza malunga nokuxinezeleka kwemisipha entanyeni. Elinye inyathelo elilungileyo linokuba kukuqengqeleka ibhola yokuphulula - ngakumbi imisipha ngaphakathi kwamagxa ehlombe kunye nokuguqulwa kwentamo.
(Kumfanekiso ubona enye mat acupressure esebenzayo. Cofa kumfanekiso okanye ikhonkco apha ukufunda ngakumbi malunga nento ebizwa inqaku le-trigger mat.)
Okunye okucetyiswayo kokuZinceda kwiRheumatic kunye neePain eziNgapheliyo
IArnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu (ezinye izigulane ezine-PMR zivakalelwa kukuba i-arnica cream okanye i-balm inokuthomalalisa)
Ngaba i-Polymyalgia Rheumatism yam iya kuqhubeka nokonakala ngokuhamba kweminyaka?
I-PMR inokwenyani ngokwayo. Oku kuthetha ukuba imeko ayihlali isigxina, kodwa isehlala ixesha elide. Iintlungu kunye neempawu ezibangelwa yi-PMR zihlala zibalulekile kwaye ziya kufuna unyango rhoqo. I-PMR ihlala iminyaka emibini, kodwa inokuqhubeka ukuya kuthi ga kwiminyaka esixhenxe. Ngelishwa, kunokwenzeka ukuba uphinde uchatshazelwe yile meko - nakwiminyaka eliqela emva kokuba ugqibele ukuba nayo.
Unyango lwe-Polymyalgia Rheumatism
Unyango luqulethe amayeza omabini ukuncedisa ukuvuvukala, kodwa kunye nonyango lomzimba ukunciphisa iintlungu kwizihlunu nakumalungu. Unyango lweziyobisi lubandakanya i-corticosteroids - njengeepilisi ze-cortisone. Iindlela eziqhelekileyo zonyango lomzimba yi-musculoskeletal laser therapy, i-massage kunye nokuhlanganiswa ngokubambisana - umzekelo kunye ne-physiotherapist okanye i-chiropractor. Izigulane ezininzi nazo zisebenzisa imilinganiselo yokuzimela kunye nokunyanga (njengoko kuboniswe ngasentla). Umzekelo, ukuxhasa ucinezelo kunye neebhola ze-trigger point.
I-Polymyalgia Rheumatism kunye ne-Glandular Arthritis
I-PMR iwonyusa kakhulu umngcipheko wokukhula kwesifo samathambo esisigebenga-esikwabizwa ngokuba sisifo samathambo sexeshana. Le yimeko eyingozi enokubangela iingxaki ezinzulu ngendlela yokulahlekelwa ngumbono kunye nomngcipheko ophezulu wokubetha. Le meko ibangela ukudumba kwimithambo yegazi eya entloko nasemehlo. Phakathi kwe-9 kunye ne-20 ekhulwini labo bane-PMR bahlakulela i-giant cell arthritis - efuna unyango lwamachiza.
Amaqela enkxaso kwi-Polymyalgia Rheumatism
Sikucela ngobubele ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho(nceda udibanise ngokuthe ngqo kwinqaku). Siyavuya kwakhona ukutshintshiselana ngekhonkco ukutshintshiselana ngekhonkco kunye newebhusayithi efanelekileyo. Ukuqonda, ulwazi ngokubanzi kunye nokugxila okwandileyo ngamanyathelo okuqala obomi obungcono bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezinganyangekiyo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/polymyalgia-revmatika_1.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-06-12 21:41:222022-03-18 14:52:14Yintoni ofanele uyazi ngePolymyalgia Rheumatism
I-Fibromyalgia kunye nokukhulelwa I-Fibromyalgia inokubangela ukwanda kokuvuvukala kwengqondo